Maxaa kasoo baxay kulankii Kim iyo Trump?
Tuesday June 12, 2018 - 18:03:53 in Wararka by Abdikarim Saed Salah
singabor (Horseednews.com) Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in kulanka uu la qaatay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu ahaa mid wax ku ool ah oo kalsooni geliyay.
Trump wuxuu sheegay inuu joojinaya dhoolatuska militari halka Kim uu ballan qaaday inuu burburin doono goobaha lagu tijaabiyo Nukliyerka.
Sida ku cad heshiiska ay labada hogaamiye saxiixeen, waxaa ka go'an sidii Nukliyerka looga ciribtiri lahaa gacanka Kuuriya iyo ka shaqaynta nabadda gobolka.
Mareykanka ayaa ka codsaday Kuuriyada Waqooyi in si dhamaystiran ay u xaqiijiso burburinta Nukliyerka.
Madaxweyne Trump wuxuu yiri "Waxaan filaya in labada dhinac ay ku farxi doonaan natiijada kulanka"
Kulanka kaddib hoggaamiyeyaasha waxay kala saxiixdeen dokumenti ku baaqayay in labda dal ay billowdaan xiriir cusub.
Kulanka Donald Trump iyo Kim Jong-un ayaa noqday kii ugu horreeyay ay abid qaataan madaxweyne Mareykan ah iyo hoggaamiye Kuuriyada Waqooyi ah.
Waxay isku salaameen hoteel loo dalxiis taga oo ku yaalla Jasiiradda Sentosa ee dalka Singapore ka hor inta ay u billaabanin wadahadallada.
Trump oo saaxibtinimo dhaw u muujinaya hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wuxuu sheegay inuu Aqalka Cad ku marti qaadi doono Kim Jong-un.
Hoggaaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wuxuu dhankiisa sheegay inay go'ansadeen in laiska illaawo wixii horay u dhacay, heshiiskaana ''uu adduunka u horseedi doono isbadello waaweyn.''
Dadka falaanqeeya siyaasadda gobolka ayaa ku kala aragti duwan qodobada ugu dambayn kasoo baxay kulanka, qaarkood waxay u arkaan kulan aan wax wayn soo kordhinayn, halka qaar kalena ay rumasan yihiin in kulanka uu noqon karo dhabbihii nabadda loo qaadi lahaa.
Heshiiska labada dhinac ay kala saxiixdeen ma ahaan mid faahfaahin ka bixiyay sida gacabka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan niyukliyeer.
Mareykanku wuxuu sheegay inuu dammaanad qaadi doono ammaanka Kuuriyada Waqooyi inkastoo aanan la sheegin waxaa ay ka dhigantahay arrintaasi.
Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan wadahadallo kale oo looga hadlaya amniga gobolka.
Sawirka lasoo qaaday ayaa muujinaya labada hoggaamiye oo is salaamaya, waxay astaan u noqonaysaa in labada dal ay xiriir wanaagsan yeeshaan kuwaaso muddo 20 sanno ah ay cadowtinnimo ka dhexeysay.
Kulankii taariikhda galay
Trump iyo Kim Jung-un waxaa la socday oo kaliya ah markii ay kulmayeen labo qof oo u kala turjumo, waxayna hadleen in ka yar 40 daqiiqo, kaddibna waxaa kusoo biiray wufuud la taliyeyaal ah oo kulankooda qadada qeyb ka ahaa.
Waxaana ka mid ahaa mas'uliyiinta joogay kulanka xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo la taliyaha ammaanka John Bolton, dhanka Kuuriyada Waqooyi waxaa joogay madaxii hore ee sirddoonka Kim Yong-chol iyo wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong-ho.
Kim iyo Trump ayaa ku qadeeyay cunnooyin isku dhaf ah oo laga keenay dalalka reer galbeedka iyo Kuuriya.
Muxuu uga dhigan yahay kulanka labada dal?
Kulanka taariikhiga ahwaxa alagu tilmaamay mid dan ugu jira labada dal inkastoo dhowr jeer oo hore uu qark u saarnaa inuu baaqdo.
Dad badan ayaa rumaysan in natiijada kasoo baxday kulanka aysan waxtar noqon doonin.
Inuu la kulmo Kim madaxweyne Mareykan waxay u tahay guul maadama aabihii iyo awoowgii aysan samaynin arrintaasi.
Mareykanka ayaa cadaadis ku hayay Kuuriyada Waqooyi oo ay kamid ahayd cunaqabataynta dhaqaale uu dalkaasi kusoo rogay.